MCB အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ သုံးစွဲသူ Customer များအတွက်အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး၊ အင်တာနက်ရှိရုံဖြင့်မိမိ ၏ Mobile Phone Internet Browser/ laptop/ Desktop (Internet Browser) မှတစ်ဆင့် မိမိတို့၏ ဘဏ်စာရင်းအချက်အလက် အချက်အလက်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာဖြင့် ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
BUSINESS INTERNET BANKING ဆိုသည်မှာ Company များအနေဖြင့်မိမိ Company ၏ဘဏ်စာရင်း အချက်အလက်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာဖြင့် မိမိ Company အကောင့်များမှတစ်ဆင့် ငွေလွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
လူကိုယ်တိုင်ဘဏ်သို့ လာရောက်စရာမလိုပဲ မိမိတို့၏Mobile phone internet browser/ Laptop/ Desktop မှနေ၍ အင်တာနက်ရှိရုံဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သက်သာစွာဖြင့် (၂၄/၇) ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။
မိမိ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်အား ပြောင်းလဲလိုပါက အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း။
မိမိကတ်(Debit Card) နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေး ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
မှတ်ပုံတင်နိုင်ရန်အတွက် လျောက်ထားသူသည် MCB ဘဏ်၌ အကောင့်ဖွင့်လှစ်ထားရပါမည်။
အင်တာနက်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု့အား Internet Browser မှ အသုံးပြုနိုင်ရန်Mobile Phone Internet Browser/ Laptop (or) Desktop
Business Internet Banking အသုံးပြုမည့် User များအတွက် Company Cover Letter ဖြင့် Assign Person Lists လိုအပ်ပါသည်။
Company Account ဖွင့်ရာတွင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများအတိုင်း ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
မိမိတို့၏ဖွင့်လှစ်ထားသောဘဏ်စာရင်းအချက်အလက်များကို MCB Internet Banking ရှိ Dashboard စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ငွေပေးငွေယူ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပတ်သတ်သည့် မှတ်တမ်းများကို(၁၀)ကြောင်းအထက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလိုလျှင် ရက် (၉၀) အထိပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
မိမိ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်အား ပြောင်းလဲလိုပါက အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
MCB ဘဏ်၏ဘဏ်ခွဲများ ငွေထုတ်စက် တည်ရှိရာနေရာများအား ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှုန်းထားများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
မိမိကတ် (Debit Card) ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ATM သို့သွားရောက်စရာမလိုဘဲ MCB Internet Banking မှနေ၍ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း။
မိမိကတ် (Debit card) အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်လိုက်သော Transaction များကိုလည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
မိမိ၏ Card အား အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် အသုံးမပြုလိုသောအခါ (သို့) ပျောက်ဆုံးသွားသောအခါတွင် MCB Internet Banking မှနေ၍ မိမိ Card အား Block ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
ကိုယ်ပိုင် Company အကောင့်အချင်းချင်း ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း/ အခြားသူ၏ Company အကောင့်ဘဏ်စာရင်းအကောင့်ထဲသို့ ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း (Own Transfer/ Other Account Transfer)ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Standing order and Future Date transaction များပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
ငွေပေးငွေယူ လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့်ပတ်သတ်သည့် မှတ်တမ်းများကို (၁၀) ကြောင်းအထက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလိုလျှင်ရက် (၉၀) အထိပြန်လည် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
MCB Internet Banking ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တွင် ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းအားဝင်ရောက်အသုံးပြုရာတွင်ပိုမိုစိတ်ချလုံခြုံစေရန်အတွက် 2FA Application ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
MCB Authentication (2FA Application) အား Google Play Store , Apple Store , Huawei Gallery မှ နေ၍ Download ရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
Retail internet banking နဲ့ Business Internet banking ဘာကွာခြားပါသလဲ?
Retail internet banking သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် သာဖြစ်ပြီး Business internet banking သည် လုပ်ငန်း/အဖွဲ့အစည်း များ အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
Business Internet banking အတွက် mobile application နဲ့သုံးလို့ရနိုင်ပါသလား?
ခုချိန်မှာတော့ mobile application ဖြင့်အသုံးပြု၍မရနိုင်သေးပါ။ Mobile Phone ၏ internet browser မှနေ၍ အသုံးပြုလို့တော့ရပါသည်။
Two factor Authentication application ဆိုသည်မှာ မည်သည့်အတွက်လိုအပ်တာပါသနည်း?
Retail and Business internet banking အသုံးပြုရာတွင် Login ဝင်ရောက်ရန် နှင့် MCB အခြားအကောင့်များသို့ ငွေလွှဲရာတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ယခုလက်ရှိ mobile internet banking user များသည် Retail Internet banking ကိုလျှောက်ထားလို့ရပါသလား?
လက်ရှိ mobile internet banking user များသည် Retail internet banking အားလျှောက်ထားအသုံးပြု၍ ရပါသည်။ Mobile and internet banking လျှို့ဝှက်နံပါတ်သည် Customer မှ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာမတူညီသည့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်အားထားရှိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Business internet banking ကိုလျှောက်ထားရန် အတွက်မည်သည်တို့လိုအပ်ပါသနည်း?
Company အကောင့်လာရောက်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ဘဏ်သို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ။ Assign user များအား BOD or CEO ၏လက်မှတ်ဖြင့်လျှောက်ထားရပါမည်။
Retail internet နှင့် mobile banking တွင် မည်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ ပါဝင်ပါ သနည်း?
Co-brand debit card များအား Block/Unblock ပြုလုပ်ခြင်း၊ card transaction များစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊ card ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်အား ATM သို့သွားစရာမလိုပဲ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊ card နှင့် account ချိတ်ဆက်ထားခြင်းအား ဖြုတ်နိုင်ခြင်း များအား ပြုလုပ်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ပါသည်။
Retail, Business internet banking ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ် နှင့် Two factor Authentication ၏ Activation code အားဘယ်လိုရရှိနိုင်ပါသလဲ?
ဘဏ်မှ Customer ၏ဖုန်းနံပါတ်ထဲသို့ SMS ပေးပို့သွားပါမည်။
Retail နှင့် Business internet banking အား ဝင်ရောက်အသုံးပြုရာတွင် Two Factor Authentication ကိုမည်သို့ အသုံးပြုရမည်နည်း?
Customer မှ မိမိနှစ်သက်ရာ Online and Offline အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Offline OTP သည် ဂဏန်း ၈ လုံး ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယင်း OTP အား ၂ မိနစ်အတွင်း အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Two factor Authentication အား ဘယ်လိုရယူနိုင်မည်နည်း?
Google Play store နှင့် Apple Store များတွင် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Internet Banking Login ဝင်ရောက်ရန်အတွက် PIN/ Password lock ကျသွားပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း?
လူကြီးမင်း၏ PIN/ Password lock ကျသွားပါက PIN reset ပြုလုပ်ရန်အတွက် MCB Hotline No – 01.2399663 ကိုခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။